★မြန်မာ့အလင်း★: ဖာသည်မလောက်မှ မဖြောင့်မတ်သော စစ်သားများအတွက်
စစ်သားဆိုတာ ခြင်္သေ့လိုပဲ ရဲစွမ်းသတ္တိုရှိရမှာပါ။ ဖြောင့်မတ်တည်ကြည်ရမှာပါ။ အဲဒါဆိုရင် လူထုကလည်း ခညားကြောက်ရွံ့ပြီး ရိုသေကြမှာပေါ့။ ဒါပေမယ့် စစ်သားတွေက ယောကျားတစ်ယောက်လို ဖြောင့်မတ်တဲ့ စိတ်ထားမရှိ. . . ဗိုလ်ချုပ်တွေ ကလိမ်ကကျစ်လုပ်နေတာကို လူသိရှင်ကြား ဖင်ပိတ်ထောက်ခံတယ်။ စစ်သားက စစ်သားနဲ့တူအောင်မနေ . . NLD နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို စောက်တင်းတွေ ပြောကြတယ်။ စစ်သားက ၀န်ထမ်းလိုမနေ. . . အစိုးရတက်လုပ်နေတယ်။ စစ်သားက တိုင်းပြည်ကို ကျူးကျော်လာသည့် ၀တရုတ်များကို မတိုက်ပဲ လီးစုတ် ဖင်ရက်ပေးပြီး . . . လက်နက်မဲ့ပြည်သူများကိုသာ သတ်ဖြတ်နေတယ်။ ဖာသည်မက ၀မ်းရေးအတွက် ဖာခံတာ ပြဿနာမရှိပါဘူး။ စစ်သားက စစ်အကျီဝတ်ပြီး ဖာသည်မလို ဗလောင်းဗလဲပြောပြီး ဖြောင့်မတ်မှုကင်းတဲ့ လုပ်ရပ်ဟာ ခွေးခြင်္သေ့ နဲ့ တူနေပါပြီ။
ခွေးခြင်္သေ့ – မောင်စိန်ဝင်း(ပုတီးကုန်း)
Posted by ★သခင်မျိုးဟေ့ဒို့မြန်မာ★ at 2:02 PM